Tilmicosin Phosphate Tilmicosin phosphate waa daawada cusub ee loo yaqaan 'macrolide antibiyootig' ee loogu talagalay caafimaadka xayawaanka, waa midicine hidde ah oo loo yaqaan 'tylosin', oo loo adeegsado difaaca cudurrada habka neefsashada daran, mycoplasmosis, infekshanka bakteeriyada doofaarka, digaagga, lo'da, idaha. Magaca: Tilmicosin Phosphate Qaabdhismeedka Molecular Qaaciddada: C46H80N2 O13 · H3PO4 Miisaannada molecular: 967.14 CAS: 137330-13-3 Suuqyada: budada khafiifka ah ama jaallaha ah, waxay ku milmi kartaa biyaha. Heerka: Ganacsadaha, a ...
Tilmicosin Tilmicosin waa daawada cusub ee loo yaqaan 'macrolide antibiyootig' ee loogu talagalay caafimaadka xoolaha, waa midicine midicine ah oo loo yaqaan 'tylosin', oo loogu talagalay in lagu difaaco cudurada habka neefsashada ee daran, mycoplasmosis, infekshinka bakteeriyada doofaarka, digaagga, lo'da, idaha. Magaca: Tilmicosin Qaaciddada Milecular: C46H80N2O13 Miisaan isku-dhafan: 869.15 CAS no: 108050-54-0 Tilmaamaha: budada hurdiga ah ama jaallaha ah. Jaangooyada: Xirmidda Usp34: 20kg / kartoonnada durbaanka, 1kg / caag caag ah 6drums halkii kartoonkiiba. Stor ...
Biyoodka Tiamulin Hydrogen Fumarate waa daawada loo yaqaan antibiyootig ku takhasusay dawada xayawaanka, waxaa si weyn loogu adeegsadaa difaaca cudurrada habka neefsashada ee doofaarka iyo digaagga, waxay horumarin kartaa koritaanka xoolaha. Magaca: Tiamulin hydrogen fumarate Qaaciddada Molecular: C28H47NO4S · C4H4O4 Cilmiga Molecular: 609.82 CAS lambar: 55297-96-6 Alaabada: budada cad ama caddaanka ah # Jaangooyada: USP34 Xirmooyin: 25kg / kartoonnada Kaydinta: ku hay koronto-ilaaliye, hawo-mareenka iyo meel qalalan. Nuxurka: ≥98% Ap ...
Florfenicol Sodium Succinate Magaca Waxsoosaarka: Florfenicol sodium succinate Alaabada kiimikada: budada cad ama cad-cad, ur iyo dhadhan la'aan, marka qoyaanka hawadu ay sareyso waa mid aad u jilicsan oo ku jirta acetone, ethanol, oo si fudud biyaha loogu milmay, oo ay kujirto florfenicol sodium succinate. aan ka yarayn 95%. Soosaarka alaabada: 1. Florfenicol sodium succinate waxay ka dhigeysaa florfenicol Solubility 300mg / ml kuna dar 400 jeer. 2. Florfenicol sodium succinate ayaa sameysa ...